ababukeli abaningi ngibukele amafilimu ikakhulukazi ezimweni eziningi lola umbono wazo on ukudlala izindima eyinhloko. Ngo abadlali waphumelela ngokukhethekile lenqwaba abalandeli ezweni lonke. Bafunda emgwaqeni, ucele umbhalo wesandla sakhe, igama izenzakalo ezihlukahlukene esikhulu. Kodwa kunabantu, ngaphandle okuyinto iningi izigcawu e ifilimu alikwazanga. Kuyinto cishe stuntman ngubani bephoqeleka ukuba afake ukuphila kwawo engozini ukuze udale yesehlakalo ezikhexisayo. Futhi sikwenze ngendlela yokuthi umbukeli akusho ukuqaphela esikhundleni ngesikhathi sokudlala. Lutho neze wonke amandla ukuba sihlanganyele emsebenzini okunjalo kuyingozi. Kulesi sihloko sizoxoxa indoda owakwazi athole impumelelo enkulu futhi babe omunye stuntmen engcono eU.SSR Russia. Igama lalesi ungumuntu ohamba phambili kunabo Inshakov Aleksandr Ivanovich.
Life Aleksandra Inshakova egcwele ezihlukahlukene izenzakalo ezithakazelisayo. Stuntman wazalwa ngo-January 23, 1947 eMoscow. Uyise wasebenza njengomfundisi weZwi imfundo ngokomzimba futhi kusukela ekuzalweni Alexander wazama ukuyifundisa uthando ngendlela enempilo. Ngezindlela eziningi ke kuye kwafeza indima ebalulekile Inshakov enikelwe ebusheni bakhe batadisha eyala ehlukahlukene kwezemidlalo, okuyinto wakwazi ukufeza impumelelo ngokwanele sina.
Ngemva kokuphothula esikoleni esiphakeme sendawo, washintsha eziningi ubuchwepheshe. Ekuqaleni, Ngokuzayo Alexander Stunt Inshakov wasebenza kokuthunyelwe kwe-umakhenikha abavamile ke anquma ukukwenza nokuthi yini ayithandayo --judo ne yokuzivocavoca. Wakwazi ukuthola okuthunyelwe ka Umqeqeshi futhi usize abanye abantu ukuba impumelelo kulezi ezemidlalo.
Khona-ke, ekuqaleni kwawo-'70, Inshakov engangisonta nabo baqala ukufunda i-karate. Eminyakeni emihlanu kamuva ukuphila kwakhe owakwazi ukuyazi kahle leli fomu nzima karate, ngize ngibe umfundisi. Ngokuqeqeshwa kanzima futhi omuhle idatha ngokomzimba, u-Alexander wakwazi ukunqoba ubuqhawe eMoscow. Kodwa lokhu kwakunganele ngoba stuntman esizayo. Wenza ukuthuthukiswa Aikido. Phakathi kwezinye izinto, uphila skiing kanye scuba diving.
Konke lokhu kuye kwamnikeza ukuza ebhayisikobho. Cishe ngokuphazima kweso Inshakov Aleksandr Ivanovich wayesengaba Stunt adumile ongenza namaqhinga eziyinkimbinkimbi kakhulu, eziningi zazo esongela ukuphila. It is uyabandakanyeka ekwakhiweni ukulwa izigcawu ezihlukahlukene ezihilela abadlali. Endabeni yayo Inshakov kwaba ngenye yezinkampani ezingcono kakhulu. Wayesebenza kahle ithuba iqhaza engaphezu kuka amathathu abavelele yasekhaya izithombe ezinyakazayo nasemidlalweni ewuchungechunge yethelevishini. Ngezikhathi ezithile futhi uvele izindima elincane izinhlamvu ubambe Oriental ubuciko amasosha. Kodwa izindima sina futhi ezinkulu, ngeshwa, Aleksandru abakutholanga.
Eminyakeni yamuva, ngenxa yobudala bayo bekulokhu umsebenzi kakhulu yenhlangano, evele in movie sincipha isibalo sawo. Ngo 2013 wathatha okuthunyelwe eziphambili umholi we Guild of Stunt Russian. Ngaphezu kwalokho, ngezikhathi ezithile lapho uxhumeke ukuphila kwakhe emisebenzini yezombangazwe. Wayengumuntu umuntu omethembayo kaMongameli Russia - uVladimir Putin. UMongameli izimali ezihlukahlukene, wahlanganyela ukuthuthukiswa karate kuleli zwe. Ngakho u-Alexander Inshakova siqiniseka ngokugcwele kungenziwa ngokuthi isidalwa esingumuntu, uphila ukuphila okumatasa, futhi baye baphumelela ezindaweni eziningi.
Phakathi kwenkonzo yakhe ende Inshakov wakwazi ukuthola stuntman, umlingisi, umkhiqizi, screenwriter ngisho iqondiswe. Manje sizoxoxa ngeminye imisebenzi enhle kakhulu ka-Alexander.
Omunye amafilimu eqolo futhi ohahela isikhundla emlandweni wase-USSR. Kwaba khona abangu-kokubili izinkanyezi ezifuywayo angaphandle, phakathi kwabo kwakukhona futhi Alain Delon, owayeneminyaka ngaleso sikhathi inani kwayo. Lena eyodwa yala mafilimu kuqala lapho u-Alexander ubesebenza njengomshayeli stuntman.
"Cold Summer of ..."
Enye ifilimu Soviet ethandwa kakhulu, okuyinto kuwufanele ukunaka bonke abathandi cinema ezinhle. Lena fighter abukhali futhi ubukeka umxhwele kuze kube yilolu suku. Kuyinto ngodaba olungajwayelekile lapho esondweni ifilimu akuyona akusebenzi ngisho iminyaka engamashumi amathathu ngemuva kwesizini. Stuntman Alexander Inshakov lapha wabonisa bomsebenzi wakhe.
Abaningi babo kwakungabantu ukubukeka ngezikhathi ezithile kuphela neze ubani nhlo. Nokho ngeke sehluleke uma sibala ezimbalwa imisebenzi, okuyinto inkanyezi Alexander Inshakov. lezi amafilimu abadumile ngempela.
"Umuntu kusukela Boulevard des Capucines"
Omunye amafilimu kuqala Inshakova umsebenzi. Cishe, bonke khumbula kahle ukuthi kule movie ifilimu zakudala impela eningi stunts esiyingozi futhi alwe izigcawu. ekwakhiweni yabo ukwenza Inshakov. Kodwa phakathi kwezinye izinto, wabuye wadlala indima ethile ebhayisikobho movie Johnson - mustachioed cowboy ivesti. Kuyini ezithakazelisayo kakhulu kule ifilimu efanayo, wayebuye azame umfanekiso Indian. Ngemva kweminyaka engu-25, futhi uvele kumdlalo Alexander Inshakov.
Lo uchungechunge lwezinhlangano ezingathandwa ezibhekwa kwakuqala ukwanda phakathi izibukeli eziningi ezweni lethu. Ezinye moviegoers waze wambiza okungcono TV ewuchungechunge emlandweni Russian. Inshakov wadlala indima encane kuwo. Kuyathakazelisa ukuthi uzimele, wayedlala yena.
Ngo-1995, u-Alexander Stunt Inshakov wazama isandla sakhe njengoba umqondisi. Screens aphume ngempela movie yimpumelelo ngokuthi "eziMpini Zenkolo." Ngaphezu kwalokho, e-ifilimu ezinyakazayo ukucinga indikimba yendaba, naye sidlala enye yezinkulumo indima yakhe enkulu ambalwa. Futhi kule "Crusaders" Mina wokhela basebancane futhi ngaleso sikhathi nomdlali elaziwayo elincane Sergei Bezrukov.
Eminyakeni emihlanu kamuva ukuphila Inshakov kudedela umsebenzi walo wesibili - "inoveli Knight sika," alengayo esekelwe encwadini ethi ngempela owaziwa "Bala Robert Parizhsky". Nalapha ngathatha izici umlingisi sika, umqondisi abanamakhono futhi umkhiqizi Alexander Inshakov.
Ama-Movie izilaleli Russian amukelwa, kodwa akazange abe hit iphuma. Cishe, yingakho Inshakov ayisekho wasiphakamisa beziqondisa, okunomkhawulo izindima episodic ukusebenza ezinye izigcawu.
Stuntman Alexander Inshakov: uthando ukuphila
ukuphila Siqu wayesenemali eningi ngaphezu emangalisayo nesizotha futhi kancane. Alexander igana Marinoy Terentevoy. Le yunithi umndeni ngempela bajabule.
"Bosses Horrible": ukubuyekezwa movie
Top 10 Thriller nge umphumela ezingalindelekile. Top 10 okuvusa usinga esesabekayo kakhulu
Film bungenxa Kuba Guding Jr.
Fire Itshe Eliyigugu: umsuka kanye izakhiwo amaminerali ayigugu